Cecilia, tontolo iainana amin'ny fanodinana famantarana feo sy synthesis feo | Ubunlog
Cecilia, tontolo iainana amin'ny fanodinana famantarana feo sy synthesis feo
Hodinihintsika ao amin'ny lahatsoratra manaraka ny momba an'i Cecilia. Ity dia tontolo iainana fanodinana famantarana feo izay azo jerena ho an'ny Gnu / Linux, Windows ary MacOS. Ity fampiharana ity dia natao indrindra ho an'ny mpamorona feo. Miaraka amin'izany ianao dia afaka mamorona, mampifangaro ary manova feo, ahafahantsika mampifanaraka ny GUI anao amin'ny fampiasana fehezanteny tsotra. Izy io koa dia miaraka amin'ny maody sy preset tany am-boalohany ho an'ny vokatra feo sy synthesis izay ho azon'ny mpampiasa.
Cecilia ara-teknika dia tontolo fanodinana famantarana feo. Manana interface interface an-tsary ho an'ny fanodinana feo sy fonosana synthesis CSound. Cecilia dia ahafahan'ny mpampiasa manangana interface tsara amin'ny sary miaraka amin'ny sliders sy curves hifehezana ny zavamaneno CSound.
Ity rindrambaiko ity dia noforonin'ny sy ho an'ny mpitendry mozika sy mpamorona feo. Ao amin'ny programa ianao ahitana ny fitaovana fanodinana feo mahazatra rehetra toy ny EQs, ny sonic contortions wild, compressors ary retarders mifanaraka amin'ny fampiharana tsotra indrindra.
1 Toetra ankapoben'i Cecilia
2 Mametraka Cecilia amin'ny Ubuntu
Toetra ankapoben'i Cecilia
Ity programa ity dia a synthesis feo sy tontolo fanodinana famantarana feo.
Cecilia dia interface interface an-tsary ho an'ny fonosana fanodinana feo sy synthesis CSound. Izy io koa dia ahafahan'ny mpampiasa manangana fifandraisana an-tsary miaraka amin'ny sliders sy curves mba hifehezana ny zavamaneno.
Cecilia dia a programa maimaim-poana sy misokatra, izay navoaka teo ambanin'ny GNU GPL v3.
endri-javatra modules mba hahazoana tombony bebe kokoa (UltimateGrainer - Fanodinana granulation amin'ny taranaka manaraka, RandomAccumulator - Mpamory firaketana haingana miovaova, UpDistoRes - Fanodinkodinana santionany ambony sy sivana Pass Low Resonant, sns).
Manatanteraka ny fandaharana mitahiry mandeha ho azy modulations.
Ampiasao ny motera audio pyo noforonina ho an'ny fiteny fandaharana Python. Pyo mamela ny fampidirana mahery ny motera audio amin'ny interface grafika. Satria modely Python mahazatra izy io, dia tsy ilaina ny mampiasa API hifandraisana amin'ny interface.
Ny fanazavana momba ny interface interface an'i Cecilia, ny modules naorina, ary ny antontan-taratasy API dia hita ao amin'ny antontan-taratasy ofisialy an'ny tetikasa.
Mametraka Cecilia amin'ny Ubuntu
Ho hitantsika io programa io azo alaina amin'ny alàlan'ny tahiry default Ubuntu, ka ny fametrahana azy dia mila manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) fotsiny ianao ary manatanteraka ireto baiko manaraka ireto ao anatiny. Miaraka amin'izy ireo isika dia hanavao ny rindrambaiko azo alaina avy amin'ny tahiry nampidirina ao amin'ny rafitray, ary avy eo dia hametraka ny kinova farany navoakan'ity programa ity izahay.
sudo apt update; sudo apt install cecilia
Mandritra ny fametrahana azy, Mangataka alalana aminay hanatanteraka ny jackd misy laharam-pahamehana amin'ny fotoana tena izy. Ny fampandehanana jackd miaraka amin'io laharam-pahamehana io dia mampihena ny faharetana, saingy mety hitarika ho amin'ny fanakanana rafitra feno amin'ny fangatahana fitadidiana ara-batana rehetra. Izany no antony maha-zava-dehibe ny mijanona sy mamaky ny filazana.
Rehefa vita ny fametrahana dia afaka isika tadiavo ny mpandefa programa ao amin'ny rafitra misy antsika, na hanana fahafahana manatanteraka ao amin'ny terminal ihany koa isika:
Ankoatra ity fametrahana ity, azonao atao ny misintona ny kinova farany amin'ny rindranasa ho rakitra binary avy amin'ny tranokala ofisialinao.
Para esory amin'ny ekipanay ity programa ity, dia ilaina ihany ny manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) ary manatanteraka izany:
sudo apt remove cecilia; sudo apt autoremove
Azonao atao ny mihevitra ity programa ity ho fitaovana fanodinana feo azo zahana tanteraka, miaraka amin'ny fanodinana interactive amin'ny fotoana tena izy, amin'ny rakitra feo na mivantana.
Cecilia dia novolavolain'i Olivier tamin'ny fotoanany. Izy io dia mikatsaka ny hanome fampiharana fanodinana misy endri-javatra feno ho an'ny fikarohana feo sy famoronana mozika. Raha heverinao fa mahasoa anao ity tetikasa ity ary te hanohana azy amin'ny fivoarany ianao, dia miangavy anao hanao fanomezana. Ny mpampiasa dia afaka mahita fampahalalana bebe kokoa momba ny programa, ny fanavaozana azy na ny fomba fanaovana fanomezana, ao amin'ny tranokalan'ny tetikasa na ao aminao Repository GitHub.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Cecilia, tontolo iainana amin'ny fanodinana famantarana feo sy synthesis feo
GNOME dia manomboka amin'ny 2022 miresaka momba ny "1.0 lehibe", ankoatry ny zava-baovao hafa. Inona izany fandefasana lehibe izany?